Calanka TV – calanka
Articles by: calanka
Diyaarad ku kor dhici laheyd gaari boolis ah iyo wadada oo ay fariisatay: VIDEO
Booliska magaalada Florida ayaa soo bandhigay muuqaal muujinaya diyaarad habow aheyd oo dooneysay in ay fariisayo wado highway ah. Gaari boolis ah oo wadadaasi ka agdhowaa ayaa ku sigtay in ay diyaaradaasi ku dhacdo.
by calanka —	November 20, 2017 —	Video
Haweeney ka dhex heshay mashiinkeeda dharka lagu dhaqo mas weyn: VIDEO
Haweeney u dhalatay dalka Brazil oo lagu magacaabo Shirley Oliveira ayaa ka dhex heshay mashiinkeeda dharka lagu dhaqo mas weyn xilli ay dooneysay in ay dhar ku dhaqato.
Farxad iyo damaashaad gil-gilay maanta dalka Zimbabwe: SAWIRRO
Xisbiga maamula dalka Zimbabwe ee Zanu-PF ayaa Mugabe ka qaaday xilka hoggaaminta xisbiga. Waxaa loo magacaabay in xisbiga uu hoggaamiye ka noqdo madaxweyne ku xigeenkii hore, Emmerson Mnangagwa – kaas oo laba isbuuc ka hor uu Mugabe ka ceyriyay xilka.
by calanka —	November 19, 2017 —	Sawirro
Baar caalami ah oo biyo barafeysan oo bulac ku jira u geeyay macaamil: VIDEO
Baar caalami ah oo lagu magacaabo Waffle House islamarkaana ku yaal gobolkaasi Florida ee dalka Mareykanka ayaa waxaa uu macaamil soo booqday oo biyo qabow iyo raashin ka dalbadan waxaa uu biyihii ka dhex helay bulac.
by calanka —	November 19, 2017 —	Video
JENERAL MORGAN: ” – Waa noolahay, warka SNTV laga sii daayayna waa been oo waqtigeyga ayaan sugayaa”
Waxaa baraha bulshada iyo warbaahinta qaranka lagu qoray in uu geeriyooday Jeneral Maxamed Sicid Xirsi Moorgan oo ahaa wasiirkii gaashandhiga dowladii kacaanka ee Siyaad Barre, balse jeneraalka ayaa farriin uu ku beeninayo warkaasi soo saaray.
by calanka —	November 18, 2017 —	Video
Booliska Kenya iyo taageerayaasha mucaaradka oo maalinkii labaad Nairobi ku dagaallamaya: SAWIRRO
Waxaa magaalada Nairobi maalinkii labaad ku “dagaallamaya” taageerayaasha mucaaradka iyo booliska dalka Kenya, waxaana jira khasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac kuwaas oo soo gaaray taageerayaasha mucaaradka.
by calanka —	November 18, 2017 —	Sawirro
Daad qaaday caasimadda dalka Griigga iyo qoxooti ka duceeyay raxmadda Alle: SAWIRRO
Daadad xooggan ayaa qaaday qeybo ka mid ah caasimadda dalka Griigga ee Athen, waxaana daadadkaasi ka duceeyay qoxootiga tirada badan ee ku nool dalkaasi kuwaas oo alaabaha roobku guryaha ka soo saaray guranayay.
by calanka —	November 17, 2017 —	Sawirro
Taliyaha militeriga Somaliland oo hanjabaad u diray guddoomiye Cirro iyo taageerayaashiisa: VIDEO
Inkastoo aan wali lagu dhawaaqin natiijada doorashadii maalmo ka hor ka dhacday Somaliland ayaa waxaa hadana soo ifbaxaya warar sheegaya in doorashada lagu shubtay islamarkaana uu xisbiga Kulmiye ku guuleystay.
by calanka —	November 17, 2017 —	Video
Indhoole laga bad-baadiyay tareen jiiri lahaa iyo ninkii bad-baadiyay oo “halyeey” loo aqoonsaday: VIDEO
Dalkaasi Mareykanka, gaar ahaa caasimadda gobolka Colorado ee Denver waxaa ka dhacay dhacdo ay warbaahintu aad uga hadashay kadib markii nin indhoole ah laga bad-baadiyay tareen jiiri lahaa. Ninka bad-baadiyay ayaa loo aqoonsaday Halyeey.
US: Booliska gobolka Florida oo baadi-goobaya nin dhow qof siyaabo kala duwan u dilay: VIDEO
Mudo afar isbuuc ah ayaa waxaa gobolka Florida ee dalkaasi Mareykanka siyaabo kale duwan loogu dilay afar ruux kaas oo uu dilkoodu ka dambeeyay nin dhallinyaro ah oo ay iminka boolisku baadi-goobayaan.
by calanka —	November 16, 2017 —	Video